सावधिक र आजीवन बीमा योजना – Asian Life Insurance
आजीवन जीवन बीमा योजना
आजीवन जीवन बीमा योजना बीमितले बीमा अवधिभर पुरै किस्ता तिरेको अवस्थामा आजीवन कायम रहने बीमा योजना हो । अर्थात् बीमा अवधि समाप्त भएपछि पनि बीमित जीवित रहुञ्जेल यो बीमा चालू रहन्छ । यो बीमा सावधिक बीमा योजना भन्दा फरक छ । सावधिक बीमा योजनामा बीमा अवधिको समाप्तीपछि बीमाको सुविधा पनि समाप्त हुन्छ । तर आजीवन बीमा योजनामा बीमा अवधि पुरा हुँदा पनि बीमितको जीवनभर बीमा अन्तर्गतको सुविधा कायमै रहन्छ । यो बीमा योजनामा बीमा अवधिपछि बीमित स्वयंले र बीमितको निधनपछि इच्छ्याएको व्यक्ति वा कानूनी हकवालाले पनि बीमांक रकम भुक्तानी पाउँछन् । अर्थात् दुई पटक भुक्तानी पाइन्छ ।
आजीवन बीमा योजनाको फाइदाहरु के हुन् ?
*यसको बीमाशुल्क बीमा अवधिभर स्थिर हुन्छ । बजारको अवस्था अनुसार घटबढ हुँदैन ।
*तपाईले बीमा अवधिभित्र बीमालेखको धितोमा कर्जा लिन सक्नुहुन्छ ।
*नियमित बीमाशुल्क भुक्तानी गरेको अवस्थामा कालगतिले मृत्यु हुँदा बीमांक र दुर्घटनाबाट मृत्यु हुँदा दोब्बर बीमांक रकम भुक्तानी हुनेछ ।
आजीवन बीमा योजनाको बीमाशुल्क र दुर्घटना मृत्यु लाभ निश्चित हुन्छ:
बीमाशुल्क र दुर्घटना मृत्यु लाभ बीमा अवधिभर निश्चित हुन्छ । बीमा अवधिको समाप्तीको निश्चित वर्षसम्म पनि(सामान्यतया ७० वर्षको उमेरसम्म) दुर्घटना मृत्यु लाभ कायम रहन्छ । स्थिर बीमाशुल्क र लाभ प्राप्त हुने भएकोले उमेर ढल्कदैं जाँदा धेरै बीमाशुल्क तिर्नुपर्ने चिन्ता लिनुपर्दैन । र तपाईको आश्रितलाई पनि तपाईंको निधनपछि बीमा कम्पनीले कति रकम भुक्तानी दिन्छ भन्ने कुरा पनि ढुक्क हुन्छ ।
बीमा अवधि समाप्ती नहुँदै प्राप्त हुने मृत्यु लाभः
बीमा अवधि पुरा नहुँदै कालगतिले बीमितको मृत्यु हुन गएमा बीमितले इछ्याएको व्यक्ति वा कानूनी हकवालाले पुरै बीमांक रकम र दुर्घटना भएको अवधिसम्मको बोनश रकम एकमुष्ठ भुक्तानी प्राप्त गर्छन् । तर यसको लागी बीमितले नविकरण बीमाशुल्क नियमितरुपमा भुक्तानी गरेको हुनुपर्छ ।
आजीवन बीमा योजनाबाट कर्जा सुविधा पनि पाइन्छः
आजीवन जीवन बीमा योजनाले तपाईलाई अत्यावश्यक परेको समयमा कर्जा सुविधा पनि उपलब्ध हुन्छ । बीमालेखको समर्पण मूल्यको ९० प्रतिशतसम्म कर्जा रकम पाइन्छ । सामान्यरुपमा गणना गर्दा बीमितले भुक्तानी गरेको कूल बीमाशुल्क रकमको ९० प्रतिशसम्म कर्जा रकम पाइन्छ । सामान्यता बीमालेख जारी भएको दुई वर्ष र दुई वार्षिक किस्ता भुक्तानी गरिसकेको बीमालेखमा कर्जा उपलब्ध हुन्छ । एकल बीमाशुल्क भुक्तानी गर्ने बीमा योजनामा १ वर्षको अवधि पुरा भएपछि कर्जा सुविधा उपलब्ध हुन्छ ।
आयकर छुट सुविधा पनि पाइन्छः
बीमितले बीमाशुल्क आयकरको गणना गर्दा आफूले वार्षिकरुपमा भुक्तानी गरेको बीमाशुल्कमध्ये रु.२५,००० (अक्षरेपी पच्चीस हजार)सम्म वार्षिक आयबाट घटाउन पाउँछन् ।
आजीवन बीमा योजनाको बीमाशुल्क कति पर्छ ?
आजीवन बीमा योजनाको बीमाशुल्कको गणना बीमितले रोज्ने सुविधा, बीमितको उमेर, बीमाशुल्क भुक्तानीको तरिकासहित विभिन्न पक्षहरुमा निर्भर गर्छ ।
बीमाशुल्क भुक्तानीको लागी तपाईले वार्षिकरुपमा निश्चित बीमाशुल्क भुक्तानी गर्न सक्नुहुन्छ । एकल(एकै पटकमा सबै बीमाशुल्क भुक्तानी गर्न सकिने),मासिक, त्रैमासिक अद्र्ध वार्षिक, वार्षिक भुक्तानीको सुविधा पनि उपलब्ध हुनसक्छ । तर वार्षिकरुपमा भुक्तानी गर्नुभन्दा मासिक, त्रैमासिक, अद्र्ध वार्षिक भुक्तानी गर्दा बीमाशुल्क महँगो पर्न जान्छ ।
आजीवन बीमा योजना कसले रोज्ने ?
अब, तपाईको लागी कस्तो अवस्थामा आजीवन बीमा योजना उपयुक्त होला त ? जीवनभरको लागि आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्न चाहनेको लागि आजीवन बीमा योजना उपयुक्त हुन्छ । किनकी यो बीमा योजनाले स्थिर बीमाशुल्क र मृत्यु लाभ दुबै सुनिश्चित गरेको हुन्छ ।
यदि तपाई आजीवन बीमा योजनाबारे सोच्दै हुनुहुन्छ भने आफ्नो नजिकको शाखा वा हाम्रो अभिकर्तासँग सम्पर्क गर्नुहोस् । उनीहरुले तपाईलाई विभिन्न विकल्पहरुबारे सबिस्तार जानकारी दिएर तपाईलाई उपयुक्त निर्णय गर्न सघाउनेछन् । तपाईलाई आफू र आफ्नो परिवारको लागी सही बीमा योजना छनौट गरेको छु भन्नेमा ढुक्क बनाउनेछ ।
आजीवन जीवन बीमा....
जीवन बीमा योजना मुख्य....
सुखी जीवन (सावधिक र आजीवन)....